टुबोर्ग ३३० स्लिक क्यान बजारमा, मूल्य १७५ मात्र | Ratopati
टुबोर्ग ३३० स्लिक क्यान बजारमा, मूल्य १७५ मात्र
काठमाडौं । ग्राहकहरुको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै गोर्खा ब्रुअरीले नयाँ ३३० मि.लि. स्लिक क्यान बजारमा सार्वजनिक गरेको छ ।
गोर्खा ब्रुअरीले सन् १९९० मा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड टुबोर्ग नेपालमा भित्राएको थियो । विश्वप्यापी रुपमा सन् १८८० देखि उपभोक्ताहरुले यसको अदभुत ताजा स्वादको आनन्द लिईरहेका छन् भने नेपाली बजारमा पनि नं. १ बियर ब्राण्डको रुपमा रहेको छ ।
टुबोर्ग गोल्ड बियर ले नयाँ ३३० मि.लि. स्लिक क्यान मात्र रु. १७५मा ल्याएकोे छ । यसमा टुबोर्ग गोल्डको त्यही स्वाद नयाँ आकर्षक प्याकेजिङ्गमा रहेको छ । त्यसैले सोही स्वादको टुबोर्ग, सानो टे«ण्डी प्याकमा किफायती मूल्यमा उपलब्ध छ ।